Wararka - Sida loo Dayactiro Silsiladda Haydarooliga
Sida loo Dayactiro Silsiladda Haydarooliga
Shaqo fiican ka nadiifi nadaafadda, rabto inaad shaqo fiican ka qabato dayactirka qalabka silsiladda, markaa waa inay shaqo fiican ka qabataa nadaafadda. Tani waa arrin aad muhiim u ah, silsiladda tamarta ee habka isticmaalka muddada-dheer waxay soo saari doontaa boodh iyo wasakh badan, haddii aan waqtiga lagu nadiifin, waxay saameyn ku yeelan doontaa isticmaalka caadiga ah ee badeecada, marka waa inaan shaqo wanaagsan qabannaa nadiifinta qalabka ka dib markaad isticmaasho maalin kasta, taas oo sidoo kale ah habka dayactirka wanaagsan ee qalabkan.
Marka hore, saliida haydarka waa in si joogto ah loo badalaa shaashadda shaandhada ee nidaamka waa in la nadiifiyaa si loo hubiyo nadaafadda loona dheereeyo nolosha adeegga.
Ta labaad, silsiladda saliida ee isticmaal kasta, si ay u fuliso ballaadhin buuxda iyo foosha tijaabada waxay u socotaa 5 garaac, ka dibna waxay ku socotaa culeys. Sababta Sidan oo kale, hawada nidaamka waa la daali karaa, nidaamyadana waa la sii kululeyn karaa. Jiritaanka hawo ama biyo nidaamku wuxuu si wax ku ool ah uga fogaan karaa ifafaalaha gaaska qarxa (ama gubashada) ee aaladda dhululubo, taas oo dhaawici doonta shaabadda isla markaana sababi doonta daadashada gudaha ee dhululubo saliidda ah.
Seddexaad, heerkulka nidaamka waa in si fiican loo xakameeyo. Haddii heerkulka saliidu aad u sarreeyo, nolosha adeegga shaabaddu way yaraan doontaa. Haddii heerkulka saliidda uu aad u sarreeyo muddo dheer, shaabaddu si joogto ah ayey u liidataa ama xitaa gebi ahaanba aan ansax ahayn.
Tan afraad, ka ilaali dusha sare ee usha bistoolada si aad uga hortagto waxyeelada ku soo gaadha shaabadda adoo kuuskuus iyo xoqid ah Nadiifi giraanta boodhka ee shaabadda firfircoon ee silsiladda saliida iyo qiiqa saaran usha bastooladdu soo bandhigtay, si looga hortago wasakhda dusha sare ee usha bistoolada inay gasho silsiladda saliidda oo ay waxyeello u gaadho bistooladda, silsiladda ama shaabadda.
Marka shanaad, si joogto ah u hubi dunta, balka iyo qaybaha kale ee isku xidha, isla markaana isla markiiba ku xir haddii ay dabacsan yihiin.
Tan lixaad, inta badan saliidayn qaybaha xiriirinta si looga hortago daxalka ama xirashada aan caadiga ahayn ee gobolka aan saliidda lahayn.